बर्दिवास सरसफाई महाअभियान : गर्नेलाई पुरस्कार, नगर्नेलाई दण्ड ! – The Public Today
बर्दिवास सरसफाई महाअभियान : गर्नेलाई पुरस्कार, नगर्नेलाई दण्ड !
विजय कुमार सिंह असोज २८, २०७६ १०:५२ am
बर्दिवास, असोज २८ गते । सरसफाइमा तमाम मनहरु समर्पित छन् । हृदयदेखि अभियानीहरु सक्रिय छन् । त्यसैले ‘बर्दिबास सरसफाई महाअभियान’ पाँचौं हप्ताको खुडकिलो चढेको छ । अभियानले अभियन्ता, स्थानीयबासिन्दा, व्यपारी, संघसंस्था र सरकारलाई गोलबन्ध गरेको छ । बर्दिबास पहिले भन्दा अहिले सफा देखिन्छ ।
कुनै पनि अभियान सुरु गर्नु ठूलो कुरो होइन्, निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरसफाई अभियानलाई हालसम्मको उचाई पु¥याउन खटिएका अभियानीहरुलाई बधाई तथा धन्यवाद !
घडीले जब बेलुकीको चार बजेको संकेत गर्छ, अनि सरसफाई अभियानीहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन्, हातहातमा पञ्जा लगाउँछन् । कोही फोहोर टिप्छन् त कोही सरसफाई बारे सन्देश बाँड्छन् त कसैले गमलाको फूल बारे खोधिखोजी गर्छन् । ‘म सफा राख्छु,मेरो गाउँघर, छरछिमेक, हाटबजार, मठमन्दिर’ भन्ने आदर्श वाक्यले सरसफाई अभियनाले मुर्त रुप लिएको हो ।
सरसफाई विना स्वच्छ जीवनको कल्पना पनि गर्न सकिदैंन । त्यसैले सरफाइलाई मानवले दैनिक जीवनसंग जोड्न जरुरी छ । भनिन्छ, सितैमा पाइएको औखती र सल्लाहको महत्व हुदैंन ।जब कुनै वस्तु मूल्य तिरेर खरिद गरिन्छ, तब मात्रै किन्ने मान्छेलाई त्यसवस्तुको महत्व बारे गम्भिर बन्छ । त्यस्तै भएको छ, बर्दिबास सरसफाई अभियानको सन्दर्भमा ।
जथाभावी फोहोर गर्नु हुदैंन, फोहोर सफा गर्नु पर्छ, आफ्नो पसल, घर अगाडिको फोहोर व्यक्ति स्वंयमले सफा गरौं, नगरपालिकाको फोहोर उठाउन आउने गाडीमा हाल्नु होला भन्ने सन्देश महिना दिनदेखि रेडियोमा बजिरहेको छ । टेम्पोमा राखिएको साउण्ड सिस्टमले फुकेको फुकै छ, चोकचौरामा । तर, व्यपारी, बटुवा, यात्रीहरुले त्यसको अटेर गरे जस्तो छ ।
व्यपारीहरु वस्तु बिक्री गर्छन्, रुपैयाँ जती गल्लामा हाल्छन्, फोहोर जस्ती बाहिरै फाल्न छाँडेका छैनन् । पढेलेखेकाहरु पनि पानीका बोतल , चाउचाउ, चनाचटपटे, पानपराग खाएर बाहिरै फाल्छन् ।
बर्दिबास सरसफाई अभियना पाँचौं हप्तामा आइपुग्यो । डस्टवीनमा फोहोर व्यवस्थान गर्ने वानीको विकास भयो । तर, अभियानको मर्म अनुसार सोंचे जस्तो उपलब्धी भने अझै हात पार्न सकेको छैन । दशैंमा चार दिन अभियानीहरुले बिश्राम लिदाँ फेरी बढेको फोहोरले त्यो देखाइदिएको छ । अभियनाीहरुले सधैं फोहोर संकलन गर्ने स्वरुपलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । जति सम्झाउँदा पनि बाहिरै फोहोर फाल्ने व्यपारी, यात्रुहरुको व्यवहारमा खाँसै परिवर्तन भएको देखिदैन ।
अब बर्दिबास सरसफाई महाअभियना संचालन समितिले कठोर कदम चाल्ने समय आइसकेको छ । तोकेको ठाउँमा फोहोर व्यवस्थान गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ सरसफाई गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश लेखिएको टोपी, भेस्ट दिएर हौसाउनु पर्छ । पसल अगाडी आहा सफा छ ! भन्ने स्टीकर टाँसे अभियना प्रभावकारी हुन्छ । फोहोर गर्नेलाई कारवाही गर्नै पर्छ ।उनको पसल अगाडी छिःछि लेखिएको स्टिकर टाँसिदिनु पर्छ र नगद कारवही गर्नु पर्छ । ताकी लाजले पनि सरसफाई गरुन् ।सफाई गर्न थालेपछि आहा सफा छ भन्ने ! स्टीकर टाँस्नु पर्छ ।
फोहोर गर्ने बटुवालाई च्याप समाएर प्रहरी भ्यानमा राखेर एक छिन भएपनि डर देखाउनु पर्छ । केही नगद कारवाही गरिनु पर्छ । अबका दिनमा अभियानकर्मीले फोहोर टिप्नु भन्दा पनि अनुगमनको पाटोलाई कडाइका साथ अघि बढाउनु बाहेक अरु विकल्प छैन । जब सबैले सरसफाई अभियानलाई बुझ्ने छन् , अनि मात्रै बर्दिबास सरसफाई अभियनाको मर्म पुरा हुनेछ ।
भिडियोमा हेर्नुहोस सरसफाइ महाअभियान !